December 7, 2017 - Nepali Sajha
प्रदेश सभामा मनाङबाट कांग्रेसले खोल्यो विजयी खाता
Published on December 7, 2017 in नेपाली by Nepali Sajha
Sponsored Link: नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेशसभामा मनाङबाट विजयी खाता खोलेको छ। मनाङ क मा कांग्रेसका चिन्तबहादुर घले प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार घलेले ९२८ मत पाए भने वाम गठबन्धका दोर्जे डडुल गुरुङले ८९६ मत ल्याए। Sponsored Link:
मुस्ताङबाट एमालेका तुलाचन बने पहिलो निर्वाचित सांसद
Sponsored Link: २२ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खाता खोलेको छ । मुस्ताङबाट नेकपा एमालेका प्रेमप्रसाद तुलाचन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । तुलाचनले ३५४४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीले ३२८१ मतमात्र ल्याए । यसअघि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा थकालीले जित हासिल गरेका थिए…
Tiger Tops Discontinues Elephant Polo In Nepal After 35 Years
Published on December 7, 2017 in Entertainment Nepal News by Nepali Sajha
Sponsored Link: Inahistoric move, the decision has been made to discontinue the World Elephant Polo championship in Nepal in order to support the movement against animal cruelty. Elephant polo originated in Meghauli, Chitwan and had been going on for the past 35 years. Tiger Tops was the headquarter for the elephant polo event…
प्रदेशसभामा एमालेले खाता खोल्यो, मुस्ताङ ‘क’ बाट इन्द्रधारा विष्ट विजयी
Sponsored Link: २२ मंसिर, काठमाडौं । वाम गठबन्धन प्रमुख घटक एमालेले प्रदेशसभामा पहिलो जित हासिल गरेको छ । मुस्ताङको प्रदेश ‘क’ बाट एमाले उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्ट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मंसिर १० गते सम्पन्न मतदानको मतगणना बिहीबार साँझ ५ बजेबाट सुरु भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित विष्टले ११६७ मत ल्याएका छन् भने…
ओखलढुंगाको मतगणना जारी, एमाले नेता यज्ञराजको अग्रता
Sponsored Link: २१ मंसिर, ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा प्रतिनिधि सभा तर्फ लिखु गाँउपालिकाको चार वडाको मत गरिसक्दा एमालेका यज्ञराज सुनुवारले अग्रता लिएका छन् । हाल सम्म ३ हजार ४ सय ४५ मत गणना भैसकेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार बाम गठबन्धनका उमेद्वार यज्ञराज सुनुवारले २ हजार ७७ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै…
Prakash Dahal no more posted on November 18, 2017
Samragyee RL Shah Wears Yubi Thapa Design For Sydn... posted on November 25, 2017
The Signaturee’s DECEMBER MADNESS 2017 On DEC 23!... posted on November 21, 2017
'स्याटलाइट सिटी'को सकस... posted on December 1, 2017
Nepathya releases music video of Tulsi Diwas’s Sam... posted on November 19, 2017
Nepal Elections 2017: phase II polls in snapshots posted on December 7, 2017
Various political leaders condole Dahal’s death posted on November 19, 2017
Bodhi Chhaaya – A Feast For The Eyes! posted on November 21, 2017
आज विवाह पञ्चमी, जानकी मन्दिरमा भक्तजनको भीड... posted on November 22, 2017
Buddhi Sagar’s KARNALI BLUES To Be Translated Into... posted on November 24, 2017
निर्वाचनको केन्द्रविन्दुमा शीर्ष नेता... posted on November 17, 2017
01 1511 views
02 1285 views
Entertainment Nepal News (558)